Somali ku Dhimatay Doon ku Degtay Xeebaha Giriiga. |
Somali ku Dhimatay Doon ku Degtay Xeebaha Giriiga.
Hal haween ah ayaa baddu liqday laba kalena waa laga soo badbaadiyay jasiiradda Lesbos ee Giriiga jimcihii, kadib markii ay ka dhaceen dooni ay saarnaayeen dadkaasi oo muhaajiriin ahaa.
Warbaahinta ayaa shaacisay in Doontaasi ay saarnaayeen 24 ruux oo isugu jira Rag iyo dumar Soomaali ah, isla markaana Doonta oo lagaa lahaa dalka turkiga ay dalkaasi kasoo qaaday.
Mareegka internet-ka ee infomigrants.net oo soo xiganeysay Mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Giriiga ayaa waxaa ay sheegtay in lagu raad joogo muqalisiintii dadka tahriibinayay iyo naaquudayaashii doonta.
Dhowr saacadood markii ay raadinayeen, doomaha roondada iyo diyaarad helikobtar ah ayaa helay laba haween ah oo ku jira biyaha iyo maydka mid saddexaad, sida uu sheegay Sarkaal u hadlay Ciidamada ilaaliyaha xeebaha e dowladda Giriiga.
Muhaajiriinta qaarkood ayaa sheegay inay ka yimaadeen Soomaaliya kana soo talaabeen xeebta u dhow Turkiga, waxana weli jira baadi-goob lagu haayo dad kale oo doonta saarnaa basle maqan.
Jasiiradda Giriigga ee Lesbos waa mid ka mid ah meelaha ugu waaweyn ee ay degaan muhaajiriinta ku sugan xadka koonfur-bari ee qaarada Yurub, Hay’adda qaxootiga ee Qaramada Midoobay ee UNHCR ayaa muujisay walaaca ay ka qabo dhacdadaan.